Amanqaku aseRoma Davydov kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Roman Davidov
URoman Davydov nguMboni weTekhnoloji ye-Ecommerce e Inguqu. Ngaphezulu kweminyaka emine yamava kwishishini le-IT, i-Roman ilandela kwaye ihlalutya iindlela zenguqu yedijithali ukukhokela amashishini athengisayo ekwenzeni ukhetho lokuthenga isoftware enolwazi xa kufikwa kurhwebo kunye nolawulo lwe-automation.
Lwesine, ngoFebruwari 10, 2022 Lwesine, ngoFebruwari 10, 2022 Roman Davidov
Utshintsho olubalulekileyo ekuziphatheni kwabathengi luchaphazele amashishini amaninzi kule minyaka yamva nje, kodwa icandelo le-ecommerce liye labethwa kakhulu. Abathengi abanolwazi ngeDijithali baye batsaleleka kwindlela eyenzelwe umntu, amava okuthenga angachukumisiyo, kunye nonxibelelwano lwamajelo amaninzi. Ezi zinto zityhala abathengisi be-intanethi ukuba bamkele iinkqubo ezongezelelweyo zokubancedisa ekulawuleni ubudlelwane babathengi kunye nokuqinisekisa amava omntu ebusweni bokhuphiswano oluqatha. Kwimeko yabathengi abatsha, kuyimfuneko ukuba